रेफरल स्पामको साथ धेरै पोषित? - Semalt को मार्गनिर्देशनहरू अनुसरण गर्नुहोस्
यो भन्नु गलत हुनेछैन कि गुगल एनालिटिक्स वेबसाइट मालिकहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी छ किनकि यसले तपाइँको वेबसाइटमा के हुँदैछ र कस्तो प्रकारको ट्राफिक प्राप्त गर्दछ भन्ने बारे जानकारी र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। गुगल एनालिटिक्सले हिटहरूको संख्या, बाउन्स रेटको मूल्याate्कन गर्न पनि मद्दत गर्दछ, यातायात कार्बनिक वा अजैविक हो, साथै तपाईंको साइटको सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा हेरिने पृष्ठहरू हुन्। यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि रेफरल स्पामले भर्खरका महिनाहरूमा Google एनालिटिक्सलाई हान्यो, जसको मतलब तपाईको रिपोर्ट गलत र कम उपयोगी हुनेछ। हालसालै, धेरै संख्यामा स्पामिंग यूआरएलहरू भेटिए जुन ड्राइभिंग ट्राफिकमा व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यहाँ, ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, कसरी Google एनालिटिक्स रेफरल स्प्यामबाट छुटकारा पाउने बारेमा छोटो विवरण दिइएको छ।
के तपाईका रिपोर्टहरु प्रभावित छन्?
धेरै व्यक्तिहरू कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने बारे भ्रमित छन् कि रिपोर्टहरू प्रभावित छन्। तपाईंले याद गर्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि तपाईं प्रति दिन कति हेराइहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईंले अपेक्षित भन्दा धेरै हेराईहरूको संख्या देख्नुभयो भने, यो यो संकेत हो कि स्पाम वा ह्याकरहरूले तपाईंको साइटमा हिर्काए। तपाईले आफ्नो वेबसाइटको विवरण जाँच गर्नका लागि गुगल एनालाइटिक्समा लग इन गर्नु पर्छ।
कसरी रेफरल स्पाम रोक्न?
यो सत्य हो कि गुगल एनालिटिक्सले वेबसाइट मालिकहरू र वेबमास्टरहरूको अपेक्षाहरूमा आउनको लागि सक्दो प्रयास गर्दछ। अझै, त्यहाँ संभावना छ कि यो रेफरल स्पाम द्वारा हिट हुनेछ। यसलाई रोक्नको लागि, तपाईंले प्रासंगिक प्लगइनहरू र सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ, जसले तपाईंलाई नक्कली ट्राफिकबाट छुटकारा दिन्छ। यदि ह्याकरहरूले तपाईको प्रयोगकर्तानाम र पासवर्डहरू क्र्याक गर्न कोशिस गर्दैछन भने, यो धेरै ढिलो हुनुभन्दा अघि तपाईको लगइन विवरण परिवर्तन गर्ने समय हो र तपाईले आफ्नो सबै सूचना गुमाउनुहुनेछ। प्राय जसो, ह्याकरहरूले तपाईको व्यक्तिगत जानकारी चोर्नको लागि विशेष ट्र्याकिंग आईडी र कोडहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूको आक्रमण रोक्नको लागि, तपाईंले ठूलो संख्यामा फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ र सान्दर्भिक सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ ताकि तपाईंको ट्र्याकिंग आईडी चोरी नहोस्। यो सम्भव छैन कि सबैको लागि Google एनालिटिक्स स्प्याम पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ, तर तपाईं आफ्नो विवरणहरू लुकाउन सेगमेन्टहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र इन्टरनेटमा सुरक्षित रहनका लागि केही फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको ऐतिहासिक डाटाबाट रेफरल स्पाम हटाउँदै
तपाईंको ऐतिहासिक डाटाबाट रेफरल स्पाम हटाउने समय हो। यस उद्देश्यको लागि, तपाईंले बिभिन्न पृष्ठहरूको लागि बिभिन्न खण्डहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। र अवश्य पनि, तपाईले हप्तामा एक पटक फाईलहरू जगेडा गर्न बिर्सनु हुँदैन। तपाईको पासवर्ड हप्तामा दुई पटक परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ र कडा पासवर्ड प्रयोग गर्न सम्झनुहोस् ताकि ह्याकरहरूले तिनीहरूलाई अनुमान गर्न सक्दैनन्। पहिले, तपाईंले होस्टनाम मेलहरू फिल्टर गर्नुपर्नेछ र अद्वितीय डोमेनहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ। अर्को चरण भनेको सकेसम्म धेरै पृष्ठहरूमा फिल्टरहरू थप्नु हो।
ज्ञात बोटहरू बहिष्कार गर्नुहोस्
ज्ञात बोटहरू बहिष्कार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनीहरूले तपाइँको साइटलाई मिनेटमा नै संक्रमित गर्न सक्दछन्। गुगल एनालिटिक्सलाई थाहा छ केहि बट्स फिल्टर र सजिलै हटाउन सकिन्छ। यसको लागि तपाईले प्रशासक सेक्सनमा जानुपर्नेछ र सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यदि तपाइँ यी सबै चरणहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई Google एनालिटिक्स रेफरल स्प्यामबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ।